Ha weghachite Apple's Campus 2 na Minecraft | Esi m mac
Ọrụ ndị dị na Apple's Campus 2 na-ewe ogologo oge karịa ka emeburu. Akụkụ nke ụta bụ n'ihi igbu oge site n'aka ndị ọrụ ngo n'ihi mgbanwe oge ikpeazụ na saịtị ahụ. Mana dịka anyị gwara gị n’izu gara aga, ọbụghị ụta dịịrị maka nke ikpeazụ a, kama ọ bụ izu oke site na obere ihe site na Apple Mee ka ndị niile sonyere na iwu ahụ zukọta ugboro ugboro, nke mere na oge niile ndị ọrụ ngo doro anya etu esi aga n'ihu n'oge niile.
N'oge ahụ, dị ka anyị gwara gị na mmalite nke ọnwa, ọrụ n'oge a na-aga n'ihu na Emebeghi ya ka emechara ya rue mbido nkeji nke abuo nke afo, na obere chioma. Mana ka ngwucha zuru ezu, onye na-egwu egwu Minecraft bụ Alex Westerlund emeela ezigbo oyiri, ka ọ na-ekwu, nke Apple's Campus 2 Iji nwee ike ime ụdị o a were 232 awa na-enweghị enyemaka nke ọ bụla mods. Ọ na-ekwukwa na ọ bụ 100% ziri ezi na Campus 2. Site na ihe ị nwere ike ịhụ site na mpụga ma ọ bụrụ na ọ dị ka ezigbo oyiri, ya na isi iyi ya, osisi ya, ebe egwuregwu ya na ndị ọzọ, mana site na ime (nke o nwere recreated) pere mpe ma obu ihe obula ahubebeghi, ya mere na-ekwu na ọ bụ ezigbo oyiri ga-abụ ụgha.
E mechabeghị oyiri a, dị ka ogige ụgbọ ala, ụlọ ihe nkiri, ebe a na-edozi ya ka kwesịrị ka emechara ... Dabere na Alex, iwu nke oyiri nke Apple's Campus 2 bụ 50%, Ya mere, ị ka nwere oge elekere 200 ọzọ iji rụchaa ọrụ nkeonwe a nke ị tinyeworị ihe karịrị otu afọ iji mee ya. Onye hụrụ n'anya Minecraft dabere na vidiyo ndị Matthew Roberts zipụrụ na ọwa YouTube ọ bụla kwa ọnwa yana na anyị ekwuputala na m sitere na Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ha weghachite Apple's Campus 2 na Minecraft
Mmejuputa ego nke Apple Pay na South Korea ji nwayọ nwayọ karịa ka aturu anya